Amathuluzi aphezulu we-10 App Store Optimization Ukwenza Thuthukisa Izinga Lokusebenza Kwakho Kuzinkundla Zokusebenza Ezidumile | Martech Zone
Ngaphezulu 2.87 million izicelo etholakala ku-Android Play Isitolo futhi ngaphezu kwezicelo eziyi-1.96 million ezitholakala ku-iOS App Store, besingeke senze ihaba uma sithi imakethe yohlelo lokusebenza iya ngokuya igcwele. Ngokuqondakalayo, uhlelo lwakho lokusebenza alincintisani nolunye uhlelo lokusebenza kusuka kumncintiswaneni wakho ku-niche efanayo kodwa ngezinhlelo zokusebenza ezivela kumasegmenti emakethe nakwezinye izinto.
Uma ucabanga, udinga izinto ezimbili ukuze wenze abasebenzisi bakho bagcine izinhlelo zakho zokusebenza - ukunakwa kwabo nendawo yabo yokugcina. Njengoba imakethe igcwala ngezinhlelo zokusebenza zazo zonke izinhlobo, sidinga okuthile okudlula amathuluzi namasu wokuthuthukisa wohlelo lokusebenza we-finesse ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zethu zokusebenza ziyaziwa, zilandwe futhi zisetshenziswe izethameli zethu eziqondiwe.
Kungakho nje ukusebenza kwezinhlelo zokusebenza kungagwemeka. Ngokufana nokwenza kahle kwezinjini zokusesha, lapho kusetshenziswa amasu, amathuluzi, izinqubo namasu okwenza iwebhusayithi noma ikhasi lewebhu ekhasini lokuqala lemiphumela yokusesha, Ukusebenziseka Kwesitolo Sohlelo Lokusebenza (ASO) kwenza uhlelo lokusebenza luvele phezulu kwemiphumela yosesho ezitolo zohlelo lokusebenza.
Kuyini i-App Store Optimization? (ASO)
I-ASO iyinhlanganisela yecebo, amathuluzi, izinqubo, namasu asetshenzisiwe ukusiza isikhundla sakho sohlelo lokusebenza leselula kangcono nokuqapha izinga laso ngaphakathi kwemiphumela yosesho lwe-App Store.
Esinye sezizathu ezinkulu zokuthi ukusebenza kohlelo lokusebenza kungenakugwenywa kungenxa yokuthi kufushane ne- 70% wabasebenzisi ezitolo zohlelo lokusebenza sebenzisa inketho yokusesha ukubheka izinhlelo zokusebenza abazikhethayo noma izixazululo ezisuselwa kuhlelo lokusebenza. Njengoba kuguqulwa imiphumela yosesho engu-65%, uhlelo lwakho lokusebenza nakanjani kumele lube phezulu uma ufuna ukuthola abasebenzisi abaningi, uxhaso, uguquke njengomkhiqizo, futhi wenze okuningi.
Ukukusiza ukufeza lokhu, silapha ngokusebenza okuhle kakhulu kokubhala okuphezulu kohlelo lokusebenza, izinzuzo zalo namathuluzi ayi-10 okumele ube nawo. Ngakho-ke, uma ungunjiniyela wohlelo lokusebenza, inkampani yokuthuthukisa uhlelo lokusebenza noma inkampani ye-ASO, lokhu kubhala kuzokhanyisa amanye amathuluzi wokusebenzisa esitolo.
Ake siqale kepha ngaphambi kwalokho, nazi ezinye izinzuzo ezisheshayo zokwenza ngcono isitolo sohlelo lokusebenza.
Izinzuzo Zokusebenzisa i-App Store
Enye yezinzuzo eziyinhloko zokusebenzisa amathuluzi namasu we-ASO ukuthi uthuthukisa ukubonakala kohlelo lwakho lokusebenza esitolo salo sohlelo. Noma yini ebeka phezulu imiphumela yosesho ithathwa njengekholekile ngokwakhona. Ngaphandle kwalokhu, ukwenziwa kwesitolo sohlelo lokusebenza kukunikeza izinzuzo ezilandelayo:
Ngokwenza ubukhona bakho be-App Store nokuthuthukisa izinga lakho, i-ASO:
Ishayela ukufakwa okungeziwe kohlelo lwakho lokusebenza lweselula.
Kukunika amandla okushayela imali eningi engaphakathi nohlelo.
Inciphisa izindleko zakho zokuthola abasebenzisi bohlelo lokusebenza olusha.
Kuthuthukisa ukuqwashisa komkhiqizo, noma bengayifaki okokuqala.
Ukutholwa kwamadrayivu nabasebenzisi abafanele, bekhwalithi ephezulu abazosebenzisa izinhlelo zakho zokusebenza ngokugcwele. Abasebenzisi abanjalo banamathuba amaningi wokusebenzisa izici zakho ze-premium, amamodeli wokubhaliswa nokuningi.
Amathuluzi Athandwa Kakhulu we-ASO Wokuthuthukisa Amazinga Ohlelo Lokusebenza
Uhlelo lokusebenza u-Annie
Ukuqonda okuphelele kwemakethe yilokho okudingayo ukuthola uhlelo lwakho lokusebenza phezulu kwemiphumela yosesho futhi Uhlelo lokusebenza u-Annie wenza lokho nje. Ngokuthola i-database enkulu kunazo zonke, i-App Annie ikunikeza imininingwane ebanzi kuniche yakho oyithandayo yemakethe, izimbangi zakho, izinhlelo zokusebenza ezifanayo nokuningi.
Izibalo zokusetshenziswa kohlelo lokusebenza nemibiko
Ukulinganiselwa kwemali engenayo
Ukulandelelwa kwesitolo sangempela sesikhathi ngemininingwane kumashadi aphezulu, imininingwane yohlelo lokusebenza, umlando wezinga nokuningi
Ingxenye ehamba phambili nge-App Annie ukuthi ayinikezi okubhaliselwe okujwayelekile noma imodeli yamanani entengo. Abasebenzisi bathola izingcaphuno ezenziwe ngezifiso ngokuya ngezidingo zabo.
Elinye lamathuluzi wokucwaninga angukhiye ahamba phambili, I-Sensor Tower ikunikeza ukuqonda kwamanye amagama angukhiye izimbangi zakho ezisebenzisayo kepha uyaphuthelwa. Kukusiza ukuthi uguqule izinsongo zibe ngamathuba futhi ubethelele ubukhona bohlelo lwakho lokusebenza ezitolo.
Isihleli samagama asemqoka, amathuluzi wokucwaninga nokwenza kahle
Ukulandelela ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza
Ukuhumusha kwegama elingukhiye nokuningi
ISensor Tower inikeza ukwehluka ngamanani ayo ngamanani entengo ama-3 namaphakheji ama-2 amabhizinisi amancane. Ngamanani aqala kusuka ku- $ 79 ngenyanga kuya kuzingcaphuno ezithuthukisiwe ezenziwe ngokwezifiso, abasebenzisi bangahlela izici zabo futhi bakhokhe ngokufanele.
Uhlelo Lokusebenza Tweak
Idizayinelwe umuzwa omuhle, i- Uhlelo lokusebenza tweak inikeza imibiko ebanzi nezici zokwenza okwasendaweni. Njengoba imibiko ikhethwa emazweni angaphezu kwama-60 kumamethrikhi ahlukahlukene aphoqelelayo, leli yithuluzi lamaphupho lomthengisi wohlelo lokusebenza. Noma kunjalo, uhlelo lokusebenza lutholakala kuphela kubasebenzisi be-iOS.
Ukuqapha igama elingukhiye
Ukulinganiselwa kwemali engenayo nokuningi
Isivivinyo samahhala sezinsuku ezingu-7 sinikezwa yi-App Tweak kubasebenzisi abasha ukujwayela uhlelo lokusebenza nokuhlola amakhono alo. Uma lokhu sekuphelile, bangakhetha uhlelo lokuqalisa ($ 69 ngenyanga) noma bakhethe uhlelo lweGugu noma lwePower ngo- $ 299 naku- $ 599 ngenyanga ngokulandelana.
Ubunhloli beselula yi-USP ye I-Apptopia, evumela onjiniyela bezinhlelo zokusebenza nabaninimabhizinisi ukuthi bathole imininingwane ebalulekile yokusebenza nokusebenza kusukela kumamethrikhi eselula kumkhiqizo, ukuthengisa, amasu wemali engenayo, ukusetshenziswa, nokuningi ukwenza izinqumo eziqhutshwa yidatha.
Izinkomba zokusebenza ezisemqoka
Amathuluzi okucwaninga emakethe
Qagela noma ulinganisele izitayela zabathengi
Ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza kwezinkampani zomphakathi nokuningi
Amanani wohlelo lokusebenza aqala ku- $ 50 ngenyanga, lapho izinhlelo zokusebenza ezifika ku-5 zingasetshenziswa ngamabhizinisi.
Intandokazi yesixuku, i- isenzo seselula i-app inikeza uhla lwezici ezihlukile ezethulwe nge-UI enhle kakhulu. Isici esivelele sohlelo lokusebenza yikhono laso lokulinganisela ukusebenza kohlelo lokusebenza kwegama elithile elingukhiye.
Ukulandelela ngegama elingukhiye
Iziphakamiso zamagama asemqoka weMbangi
Imibiko ethuthukile nokuningi
Ngokufana ne-App Tweak, abasebenzisi bathola isivivinyo samahhala sezinsuku ezingu-7 ngemuva kokubhalisa. Thumela lokhu, bangakhokha u- $ 69, $ 599 noma u- $ 499 ngenyanga ngezinhlelo ze-Starter, Winner ne-Premium ngokulandelana.
Okwalabo abafuna ukukhulisa ngokomzimba izinga lohlelo lwakho lokusebenza nokubonakala, Splitmetrics iyithuluzi lakho elihle le-ASO. Inikeza imininingwane enemininingwane ngokusetshenziswa kohlelo lwakho lokusebenza kufaka phakathi ukuthi abasebenzisi bakho babuka isikhathi esingakanani amavidiyo angaphakathi nohlelo nezikhangiso zokuphromotha ukukusiza ukuthi uqonde kangcono abathengi bakho.
Kufika kuma-touchpoints ahlukahlukene angama-30 ukuhlola nokuthola ukuqonda kusuka ku-
A / B ukuhlolwa
Amathiphu avela kuma-Splitmetrics veteran angaphakathi
Qalisa ukuhlola kuqala izinhlelo zokusebenza
Ukuhlolwa kokusebenza kokuncintisana nabancintisana nabo nokuningi
Ithuluzi lidinga ukuthi uthathe idemo bese uthola izingcaphuno ezenziwe ngezifiso ngokususelwa kuzidingo zakho.
Uma ukugxila kwakho okuyinhloko kuthola abasebenzisi ngokoqobo bohlelo lwakho lokusebenza, Landela okulandelayo iyithuluzi elisebenza kahle kakhulu lokusesha uhlelo lokusebenza ongalithola. Onjiniyela bethuluzi bathi uhlelo lwakho lokusebenza lungathola ukukhuphuka okungu-490% ekufakweni kohlelo lokusebenza lwe-organic nokukhuphuka okungu-5X kokuvelayo kwamasonto onke kuzitolo zohlelo lokusebenza.
Ngohlelo lokusebenza, ungalandelela amanye amamethrikhi wokusebenza abaluleke kakhulu njengokushintshwa kwesimo segama elingukhiye, amazinga wokuguqulwa, ukulandwa futhi uhlole amasu wokuncintisana wohlelo lwakho lokuncintisana ukuze uguqule nokwakho. Futhi ungenza uhlelo lwakho lokusebenza lube lwendawo ngezici zokuhumusha zamagama asemqoka ezinikezwa yithuluzi.
Inkomba Yokusebenza ezitolo
Ukuzenzekelayo kocwaningo lwegama elingukhiye
Ukuhlaziywa kwesincintisana nokubuka konke
Izaziso ze-ASO zithunyelwa ku-imeyili nakuSlack
Amabhentshimakhi wamazinga wokuguqulwa nokuningi
Izinkampani, amanani aqala ku- $ 55 ngenyanga nge- $ 111 ngenyanga nezinhlelo zamanani ezenziwe ngezifiso zama-enterprise editions.
Uma i-Splitmetrics ibimayelana nokukhuphula ukubonakala kwezinto eziphilayo, IsitoloMaven imayelana nokwandisa amazinga wokuguqulwa. Ngokuthatha indlela eqhutshwa kakhulu yisayensi nedatha yokuhlola ukusebenza kwamakhasimende, ikunikeza amathani wokuhlola, amathuluzi namasu wokuhlola ukuqinisekisa ukuthi izivakashi zakho ziguqukela kubasebenzisi.
ISitoloMaven size sabelane ngezibalo ukuthi ukusetshenziswa kwaso kuholele ekukhuleni okungama-24% kwamazinga okuguqulwa, ukwehla okungu-57% kokutholwa komsebenzisi kanye nokukhuphuka okungu-34% kokuzibandakanya.
Ukuhlolwa kwe-A / B
Amasu wokusebenzisa okwenziwe ngezifiso namasu
I-hypothesis yokuhlola kanye nokuhlaziywa kwemiphumela
Ucwaningo lomncintiswano nokuningi
I-StoreMaven idinga ukuthi uthathe idemo bese uthola izingcaphuno ezenziwe ngezifiso ngokususelwa kuzidingo zakho.
Ukuzijabulisa yakhelwe ukuvala igebe phakathi kokuzibandakanya kohlelo lokusebenza nokuqonda ukusebenza komsebenzisi. Yakhelwe embonweni oyisisekelo wokuthi onjiniyela bezinhlelo zokusebenza nezinkampani abakutholi ukufinyelela okuhle kumpendulo yomsebenzisi namamethrikhi wokuzibandakanya ukuze basebenzise izinhlelo zabo zokusebenza nokusebenza nokubonakala. I-Apptentive ilapha ukuletha nje konke ndawonye.
Ukufinyelela kwempendulo yesikhathi sangempela
Hlaziya impilo yohlelo lokusebenza, imininingwane yabathengi nokuningi
Ukukhomba okuqondile nesilinganiso sokusebenza nokuningi
I-ASOdesk ikunikeza ukuqonda okuphelele emibuzweni abasebenzisi bakho kanye nezithameli eziqondiwe abazisebenzisayo ukufinyelela kuzinhlelo zokusebenza ezifana nezakho emakethe. Ngaphandle kwalokho, ikutshela namagama angukhiye izinhlelo zakho zokusebenza ezincintisana nabo ezikleliswe kuzo nolwazi olungeziwe ngamagama asemncintiswano aphansi. Okokugcina, uhlelo lokusebenza lukunikeza imininingwane ebucayi ngokusebenza kwamasu akho e-ASO.
Izibalo zamagama asemqoka, umcwaningi nomhloli wamazwe
Imibiko ye-Organic nezibalo
Impendulo nokubuyekezwa kokuqapha
Ukuncintisana kwamagama angukhiye wokuncintisana nokuningi
Kunezinhlelo ezimbili zamanani atholakalayo - elilodwa lamabhizinisi okuqala namabhizinisi amancane kanti elinye elezamabhizinisi nezinkampani. Amanani eziqalo aqala kusuka ku- $ 24 ngenyanga futhi aze afike ku- $ 118. Ngakwamabhizinisi, ngakolunye uhlangothi, amanani aqala ku- $ 126 ngenyanga aze afike ku- $ 416 ngenyanga.
Ngakho-ke, lawa bekungamathuluzi athandwa kakhulu futhi asebenza kahle wokwenza ukubonakala kohlelo lwakho lokusebenza kuzitolo zohlelo lokusebenza. Ngamathuluzi esesandleni, ungenza indlela yokubonakala okuphilayo, ukwanda kokutholwa komsebenzisi, ukunciphisa izindleko ngokuhola ngakunye, nokuningi. Manje, ungasebenzisa amathuluzi futhi ngasikhathi sinye usebenzele ekusebenziseni uhlelo lwakho lokusebenza ngokusebenza kwalo. Uma uhlola amanye amathiphu wokumaketha uhlelo lwakho lokusebenza lweselula nansi umhlahlandlela ophelele:
Amathiphu Wokumaketha I-App Yakho Yeselula
Tags: uhlelo lokusebenza lwe-Androiduhlelo lokusebenza annieisitolo sohlelo lokusebenzaukwenziwa kwesitolo sohlelo lokusebenzasimo sesitolo sohlelo lokusebenzauhlelo lokusebenza tweakukulandela uhlelo lokusebenzauhlelo lokusebenza lwe-apulaisitolo se-apulaukukhathazekaumabhebhanaAsoasodeskgooglegoogle ukudlala esitoloungamaketha kanjani uhlelo lwakho lokusebenza lweselulaiOSuhlelo lokusebenza iOSisenzo seselulaukumaketha kohlelo lokusebenza lweselulaisitolo sohlelo lokusebenza lweselulaIsikhundla sohlelo lokusebenza lweselulainzwa yesakhiwoama-splitmetricsisitolo